Global Voices teny Malagasy » Ny Federalisma Ve No Vahaolan’ny Krizim-Panondroana An’i Atsimo-Atsinanan’i Okraina? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Mey 2014 11:40 GMT 1	 · Mpanoratra Valentina Lukin Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Akon'ny RuNet
Ny fitsapa-kevitra vao haingana  notarihan'ny Ivotoerana ambony Momba ny Sosiolojia Iraisampirenena ao Kiev no namoaka fa tsy te-hiaraka amin'i Rosia ny ankamaroan'ny Okrainiana ao Atsimo-Atsinanana. Na izany aza, raha misy referendum tontosaina momba ny fisintahana amin'i Okraina, dia mety ho hafa ny valiny.
Tamin'ny herinandro ny nanono-tena ho Repoblika Entim-Bahoakan'i Donetsk  nampiasa kaonty Facebook -n'ny “Governoram-bahoaka” Pavel Gubarev hanambara ny fitsanganan'ny Federasiona Novorossya an'i Donetsk sy ny faritra hafa ao Donbass ao Okraina Atsinanana. Efa voatazona amponja ho fampanajàna ny lalànan'i Okraina i Gubarev tamin'ny volana lasa. Ny lahatsoratra, izay maro mpankasitraka sy mpizara, dia nandrisika ny vahoaka hifidy amin'ny 11 mey amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka hisintahana amin'i Okraina sy hitambarana amin'i Rosia sy i Belarosia.
Ny faritr'i Dobass (ahitana ny faritra sasany ao Dnipropetrovsk, Donetsk, ary Luhansk) dia efa nanana fironana hisintaka hatry ny ela , ary efa talohan'ny fiovam-pitondrana farany teo tany Kiev aza. Io faritra be arintany sy foiben'ny angovo io no iray amin'ireo faritra manana hakitroky ny mponina sy mandroso indrindra ara-toekarena  ao Okraina. Maro amin'ireo mponina aho no mahatsapa fa ry zareo no mamelona (mamahana) ny ambin'i Okraina, fihetsehampo novolavolain'ny mpisintaka.
Hatramin'izao no nahombiazana ny nataon'ny mpisintaka. Tamin'ny herinandro faharoa amin'ny volana avrily no voabodo ny Lapan'ny Tanànan'i Donetsk, ary nisy repoblika mahaleotenan'i Luhansk  najoro nanaraka izany. Hatramin'izao dia i Dnepropetrovsk irery ihany no foibe rezionaly izay nahavita nihantsy ny mpisintaka ny mpitondra. Borys Filatov , izay miasa ao amin'ny biraon'ny governoran'i Dnepropetrovsk, dia zohian'olona 30.000 ao amin'ny Facebook, ary ampiasainy ho toy ny sehatry ny fanoratan-gazety ny kaontiny. Vao haingana izy no nandeha tany amin'ny faritra atsinanan'i Dnepropetrovsk hihaona amin'ny mpiasa sy ny mpitantan'ny arintany. Nilaza i Filatov fa ny zava-dehibe aminy indrindra dia ny “miaro ny tsy fivakisan'ny fireneko, ny fiandrianam-pireneny ary ny fahaleovantenany. Tsy misy dikany ny ambiny.”
Noho ny tsy fahafahan'ny manampahefana ao Donetsk hifehy ny mpisintaka, dia misy ny Okrainiana sasantsasany mitodika any Dnepropetrovsk ho mpitarika [azy ireo]. Mampihomehy moa fa mizara flyers  any Donetsk ny mpikatroka pro-Okrainiana handrisika ny olona hiantso referendum mba hiaraka amin'ny faritra Dnepropetrovsk.
Araka ny fanadihadiana voatonona eo amin'ny fanombohan'ity lahatsoratra ity, mihoatra ny 80% ny mponina ao Dnepropetrovsk no manohitra ny fisintahana amin'i Okraina sy ny fitambarana amin'i Rosia. Ny 27,5 % avy ao Donetsk sy ny 30,3% ao Luhansk ihany no manohana ny fisintahana. Nahamarika anefa ny bilaogera sasantsasany ao amin'ny fanadihadiana fa natambatra ho iray ny fanontaniana momba ny fisintahana amin'i Okraina sy ny fitambarana amin'i Rosia. Tsy nisy ny fanontaniana momba ny fanaovana ho federaly an'i Okraina. Elena Balabanova , izay miasa ao amin'ny Lapan'ny Tanora ao Donetsk, mahita fa mizara ho sokajy efatra ny mponin'i Donbass: mpanohana an'i Okraina ho firenena tokana, mpanohana an'i Okraina atao firenena federaly, mpanohana an'i Rosia ary ny mpanohana ny fahaleovantena. Nilaza izy fa noho ny “tsy fetezan'ny fanaovana ny fanontaniana” dia nanadino ny sokajin'olona sasantsasany izy, ka ao anatin'izany ny “federalista.”
Mamolavola ny repoblika federaly ny ny federalista Okrainiana, ahitana tenim-pirenena roa — Rosiana sy Okrainiana — izay tena ifaharan'ny mpisintaka maro ao amin'ny faritr'i Donbass. Navoitran'ny iray amin'ny mpikatroka federalista, Da Dzi  fa tsy mety intsony izany Okraina fanjakana tokana, araka ny fomba nijoroany tao anatin'ny roapolo taona izay. Ny fomba tokana hialana amin'ny ra mandriaka sy hitazonana an'i Okraina hanana endrikendrika tsy miova loatra? “fanitsiana Lalampanorenana, fananganana ny Federasiona Okrainiana, ary ny fanovana ny Atsimo-Atsinanana ho Repoblika Federativan'i Novorossia.”
Nisy haba-tranonkala Belorosiana nanolotra andiam-panontaniana  izay heverina ho nanao ny asa ho tsara kokoa amin'ny fanavahana ny vondro-kevitra isan-karazany. Notontosaina an-tserasera tany amin'ny faritra Atsimo-Atsinanan'i Okraina miisa valo ny fanadihadiana. Milaza ny mpikarakara fa manamarina ny adiresy IP mialoha ny hamelana ny mpandray anjara hifidy amin'i Okraina tokana, Rosia, repoblika mahaleotena, ary ny fanaovana an'i Okraina ho federaly. Vitsy ny mponina avy ao Dnepropetrovsk sy ny faritra dimy hafa ao amin'ny faritra Novorossiya no voasarik'ity fitsapa-kevitra ity (tokotokony ho 10 000 isanisany), saingy malaza tokoa any Donetsk (safidy tokotokony ho 70 000 eo ho eo) sy ao Luhansk (tokotokony ho 30 000 eo ho eo). Mety ho misy fitongilanana ihany amin'ny fifantenana, na izany aza — ny ankamaroan'ny mpifidy an-tserasera dia nisafidy ny hiaraka amin'i Rosia, fahatelo lavitra dia lavitra kosa ny fitondrana Federaly.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/05/10/59546/
 Ny fitsapa-kevitra vao haingana: http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_.html
 Repoblika Entim-Bahoakan'i Donetsk: http://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk_People%27s_Republic
 kaonty Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852658041427609&set=a.557388854287864.148815.100000502631571&type=1&stream_ref=10
 nanana fironana hisintaka hatry ny ela: http://obozrevatel.com/politics/kto-kormit-ukrainu-pravda-i-mifyi.htm
 mandroso indrindra ara-toekarena: http://darussophile.com/2014/02/everything-is-annihilated-the-split-of-ukraine-on-the-basis-of-economic-data-important-text/
 repoblika mahaleotenan'i Luhansk: https://xxivek.net/news/19502
 Mamolavola : http://da-dzi.livejournal.com/191734.html